Todbobaadkan oo uu Kulankii 2-aad ee Golaha Shacabku baaqanayo – Kalfadhi
Kulanka Golaha Shacabka ee maanta ayaa baaqday. Kulankan kii ka horreeyey oo ay ahayd inuu dhaco Isniintii ayaa isna baaqday. Xildhibaannada waxaa loo diraa farriin maalinta ka horreysa waqtiga kulanka, taas oo aan dhicin illaa saaka.
Guddoonka Golaha Shacabka kuma guuleysan iney caddeeyaan sababaha baaqshada Kulamada Golaha todobaadkan. Isniintii ayaa ugu yaraan 20 Xildhibaan, oo ku shiray Muqdisho, waxay shirjaraa’id ku sheegeen in sababta baaqashada kulankii Golaha ee maalinkaas ay tahay Guddoonka Golaha oo diidan in War-bixinta Miisaaniyadda 2018-ka lagu soo hadal qaado Golaha.
Kulankii ugu dambeeyey ee uu Goluhu yeeshay Sabtidii waxaa si adag looga dooday War-bixin uu Guddiga Maaliyaddu ka soo saaray Miisaaniyadda 2018-ka, taas oo markii dambe ay Guddiga Maaliyaddu ku kala qeybsameen, iyada oo uu Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka, Mahad Cabdalla Cawad, mamnuucay in wa-bixintaas markale la dhex keeno Golaha. Waxaa intaas wehliyey iney Wasaaraddu diiday ku qoran war-bixinta, iyadoo lagu duray ineysan soo raacin Hab-Raacii saxda ahaa.
Marka laga soo tago war-bixintaas, waxaa Golaha la filayey in kulamada baaqday uu ku meel-marin lahaa Hindise Sharciyeedka Hanti-Dhawrka Qaranka, iyada oo la marin lahaa aqrinta 1-aad Hindisaha Sharciga Shaqaalaha Rayidka. Sidoo kale, waxaa suurtagal ah in shaqooyin intaas ka badan uu Goluhu qaban lahaa. Dhamaan shaqooyinkaas waxay dib ugu dhaceen waqti uusan Goluhu caddeyn wali.